Apple Inc ẹkenam iCloud nchekwa usoro maka iDevice ọrụ na-echekwa dijitalụ data na ntọala. The apple id onye ọrụ na-akawanye 5GB free nchekwa ma ọ dị mkpa ọrụ nwere ike nweta nkwalite nchekwa site n'ịṅa kwa ọnwa ụgwọ. The isi ihe dị mkpa nke iCloud nchekwa usoro bụ iji weghachite ehichapu data na ntọala. Data na ntọala na-kwadoo ka iCloud nchekwa na-enweghị ejikọta a onye na kọmputa. Nkwado ndabere na mpaghara usoro eme na a ụbọchị ndabere nke ahụ bụ mgbe ngwaọrụ bụ na ike isi iyi na-ekpochi na-arụsi ọrụ ike njikọ Ịntanetị. Ọ bụrụ na ndị ngwá encounters a kpatara banyere ọnwụ nke data na ntọala ọ bụ omume na-mmekọrịta ka iCloud na ndị niile chọrọ data nwere ike kwadoo.
Access backups site iCloud.com
E nwere ọtụtụ ụzọ iCloud ọrụ nwere ike ịnweta kwadoo data. Otu ụzọ bụ, ka ịnweta iCloud website. Banye na iCloud website na apple ID aha njirimara na paswọọdụ. Https://www.icloud.com/. Ọrụ nwere ike ịnweta ụfọdụ data si website.
Uru: nwetara ụzọ ịnweta onye data.
Cons: Nke a na usoro egbochi ndị ohere dịgasị iche iche nke data. Photo Ọbá akwụkwọ, ndetu, kọntaktị, ntọala bụ isi data a onye ọrụ nwere ike ịnweta site na iCloud website. Ajụjụ ahụ, ọ bụ zuru ezu? Gịnị banyere ndị ọzọ dị mkpa data echekwara na iDevice dị ka Whatsapp Mgbakwụnye, foto iyi ma ọ bụ na-akpọ akụkọ ihe mere eme? Ọrụ ga ọ na-esiri ka ịnweta echekwara dijitalụ data na ntọala site na iji usoro a.
Access iCloud ndabere site iCloud Control Panel
Nke abụọ ụzọ bụ ka ịnweta ma jikwaa iCloud kwadoo data bụ iji wụnye iCloud Control Panel.
The software bụ downloadable si ukara Apple website.
Ozugbo echichi na-dechara onye ọrụ nwere ike banye na apple ID aha njirimara na paswọọdụ
Mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịnweta iCloud ndabere dị ka ndise gosiri n'okpuru.
Uru: Apple ụzọ ịnweta data na ntọala.
Cons: The data na ike-ebudatara na-ejedebeghị photos, videos, wdg O nwere ike mwute n'ihi na ọrụ nanị akpan akpan ohere nke data.
Access iCloud ndabere site Wondershare Dr.Fone maka iOS
O doro anya na ọ usoro n'elu-enye anyị ọtụtụ akara n'elu kwadoo data. Na ndị ọzọ okwu, ị na-enweghị ike ịnweta niile data ma ọ bụ ma eleghị anya, ụfọdụ data gị mkpa. Ọ bụ a nnọọ aka ọnọdụ a onye ọrụ. Ya mere, ebe anyị na-ewebata ụzọ ọzọ iji nweta gị iCloud ndabere data na-enweghị ndị a na-agaghị emeli ma na-enyere ịzọpụta data mkpa ka ị na kọmputa ma ọ bụ weghachi ha gị iDevice.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ ọkachamara iOS data mgbake software. Ọ na-enye gị ihe n'ụzọ dị mfe ịnweta faịlụ kwadoo na iCloud. Ọ na-akwado ihe karịrị 16 faịlụ na ụdị gụnyere kọntaktị, ozi, Photos, WhatsApp Ozi, wdg
Download Free Trial version si buttons n'okpuru.
Step1 Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS
Ị dị nnọọ mkpa ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na kọmputa gị site na Download oyiyi n'elu.
Step2 Họrọ mgbake mode
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị, họrọ naputa site na iCloud ndabere File mode na-abanye na gị iCloud ozi akaụntụ abanye na.
Step3 Download iCloud ndabere
Mgbe egbu osisi na, họrọ iCloud ndabere faịlụ mkpa ka ị naghachi data site na pịa Download ibudata ya mbụ.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ na ụdị ị chọrọ iji naghachi, nke ga-enyere ị na-azọpụta oge ibudata na iṅomi data gị n'ezie adịghị mkpa.
Step4 Preview na chekwaa data gị mkpa gị na kọmputa.
Mgbe Doppler usoro na-okokụre, anyị nwere ike họrọ data ụdị anyị mkpa na ịhụchalụ ha mbụ. Ọ na-akwado ka ịhụchalụ fọrọ nke nta niile data ụdị ị nwere na iCloud. Lelee data gị mkpa ma pịa agbake ịzọpụta data na kọmputa gị.
Uru: Ọrụ nwere ike họrọ kpọmkwem data naghachi na-azọpụta ya na kọmputa.
Na-akwado fọrọ nke nta niile nkịtị data ụdị ọrụ dị mkpa.
Na-akwado iji weghachi kọntaktị, ozi, Notes na ngwaọrụ ozugbo.
Mfe na ala.
Cons: bụghị Free. The ikpe mbipute nye free iṅomi ma atụ nke data.
> Resource> iCloud> ụzọ atọ ka Download iCloud ndabere mfe.